ညီလာခံများ - ၎င်းတို့သည်အမျိုးအစားများနှင့်အခြားအရာများ - ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ
ကွန်ဖရင့်ဆိုသည်မှာသဘောသဘာဝအမျိုးမျိုးရှိသူများသည်လူမှုရေး၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၊ နိုင်ငံရေး၊ ဒီကိစ္စမှာ, လူနေမှုဘဝ၊ မိမိကိုယ်ကိုကူညီခြင်း၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးလှုံ့ဆော်မှုနှင့်မိမိကိုယ်ကိုတိုးတက်အောင်ရည်ညွှန်းသည့်အရာများအကြောင်းသီးသန့်သင်ကြားပို့ချခြင်းဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့အာရုံစိုက်သွားမည်ဖြစ်သည်။။ ဤကွန်ဖရင့်အမျိုးအစားတွင်သင့်ဘဝ၏ရှုထောင့်အမျိုးမျိုးတိုးတက်အောင်ကူညီနိုင်သည့်ပြissuesနာအမျိုးမျိုးနှင့် ပတ်သက်၍ အလွန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ပြပွဲများနှင့်ဆွေးနွေးမှုများကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
စိတ်လှုံ့ဆော်မှုဆိုင်ရာညီလာခံများသည်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ဖြစ်သောကထိကများက ဦး ဆောင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဤကွန်ဖရင့်အမျိုးအစားကိုအခြားသူများမှနိုင်ငံရေး၊ သိပ္ပံနည်းကျသို့မဟုတ်ဆွေးနွေးငြင်းခုံမှုအမျိုးအစားများမှအခြားသူများနှင့်ခွဲခြားထားသည် အဆိုပါကထိကသီးသန့်အများပြည်သူအမှာစကားပြောကြားသည်။ ဤသူသည်ပရိသတ်နှင့်သက်ဆိုင်မှုကိုဖန်တီးရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောအသံ၊ အသံပြောင်းလဲခြင်းနှင့်ခန္ဓာကိုယ်ဘာသာစကားတို့ကိုအသုံးပြုသည်။
ဒီညီလာခံကိုတက်ရောက်တဲ့သူတွေမေးတဲ့မေးခွန်းတွေကဒေတာတွေစုဆောင်းပြီးနောက်ပိုင်းကထိကရဲ့ဟောပြောချက်ကိုတိုးချဲ့ပေးတယ်။ အမည်၊ တစ်ခုကြိုးပမ်းမှုတစ်ခုရင်းနှီးသော setting ကိုဖန်တီးရန်လုပ်ဖြစ်ပါတယ်လူများသည်မိမိတို့ကိုအခြားတက်ရောက်သူများကနားလည်သည်ဟုခံစားရသောနေရာနှင့်ဟောပြောသူ၏စကားများ၌သူတို့တွေ့ရသည့်နေရာ၊ ထိုအချိန်တွင်လိုအပ်သောလှုံ့ဆော်မှု။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တခြားသူတွေရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကနေမင်းဘဝကိုလှည့်ပြန်ဖို့လိုတဲ့လှုံ့ဆော်မှုကိုအထူးအခက်အခဲကြုံတွေ့တဲ့အချိန်မှာတွေ့နိုင်တယ်။ သိပ္ပံပညာသည်ပြသနာများကိုပြသခဲ့သည်။ အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူသည်အပြင်းထန်ဆုံးမဟုတ်ပါ။ သို့သော်အခြေအနေအသစ်များနှင့်မည်သို့လိုက်လျောညီထွေဖြစ်မည်ကိုသိသူ။ ဒီအချိန်ဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုအသစ်တီထွင်ဖို့၊ ၁၈၀ ဒီဂရီအလှည့်ကိုယူပြီးဒီဘ ၀ မှာမင်းရဲ့သြဇာကတခြားသူတွေအတွက်တကယ်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာရှာဖွေတွေ့ရှိဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်ပဲ။
လူအားလုံးသည်ပြောင်းလဲမှုနှင့်တိုးတက်မှုအကြောင်းများကိုကြားရန်လိုအပ်သည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အရာရာတိုင်းဟာတခြားသူတွေရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကနေတစ်ဆင့်တတ်နိုင်တာထက်ပိုကောင်းတဲ့နည်းလမ်းရှာလို့မရဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အရာရာဆုံးရှုံးသွားတဲ့သူ၊ အခြားတစ်ယောက်ကသူမရဲ့ဘဝကိုပြောင်းလဲစေတဲ့မတော်တဆမှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ရင်နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းပြိုလဲနေတဲ့လူတွေဆိုရင်သူတို့ဘယ်လိုထွက်ရမှန်းမသိဘူး။ အကယ်၍ ကားဂိုဒေါင်တစ်ခုတွင်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုမှ ၂၁ ရာစု၏အရေးအကြီးဆုံးတီထွင်မှုကိုဖန်တီးနိုင်ခဲ့သူများရှိလျှင်ကျွန်ုပ်တို့ဆက်သွယ်ပြောဆိုပုံ၊ ပြောင်းလဲမှု၊ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဆက်သွယ်မှုပုံစံကိုပြောင်းလဲခြင်း၊ သင်ကသင်တို့၏လမ်းစဉ်ကိုပြောင်းလဲလိမ့်မည်။ အလားတူတစ်ခုခုလုပ်ဖို့နိုင်စွမ်း?
သင်သာသင့်ကိုယ်သင်စစ်ဆေးနိုင်စွမ်းရှိသည် နှင့်သင်၏အကန့်အသတ်တွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာရှာပါ။ ဤအရာအားလုံးကိုဆွေးနွေးခန်းများနှင့်ညီမျှသောခေါင်းစဉ်များ၊ ညီလာခံများမှတွေ့ရမည့်ဆွေးနွေးပွဲများနှင့်ညီလာခံများမှတဆင့်သင်လေ့လာနိုင်သည်။ အင်တာနက်ဟုခေါ်သည့်ဤတီထွင်မှုသည်ကျွန်ုပ်တို့အားအကောင်းဆုံးကမ္ဘာ့ညီလာခံများလေ့လာခြင်းနှင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းတို့ကိုဖြစ်နိုင်သည်။ တစ်ချက်နှိပ်ရုံဖြင့်မရေမတွက်နိုင်သောအခမဲ့အရင်းအမြစ်များကိုသင်ရယူနိုင်သည်။
ညီလာခံများသည်လူအများစုအတွက်ရံဖန်ရံခါစီးပွားရေးကုန်ကျစရိတ်များကြောင့်၊ လူအများစုအတွက်မတတ်နိုင်သောကြောင့်အခြားသူများသည်၎င်းတို့ကျင်းပသည့်နေရာသို့ရောက်ရန်ခက်ခဲသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဤအပိုင်းတွင်စီးပွားရေး၊ လူနေမှုပုံစံ၊ စိတ်လှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများနှင့်အခြားသူများအားသူတို့၏ဘ ၀ ကိုပြောင်းလဲရန်ကူညီပေးနေသူများ၏ကွန်ဖရင့်များကိုသင်တွေ့လိမ့်မည် သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံများမှတဆင့်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလူတွေရဲ့စကားတွေကလူတိုင်းမသိတဲ့အရာတစ်ခုကိုသင်ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်တယ်၊ ဒါကလူတစ်ယောက်ရဲ့အလားအလာကန့်သတ်ချက်မရှိဘူး။
အင်တာနက်ပေါ်တွင်ရှာတွေ့နိုင်သည့်အကြောင်းအရာအမျိုးမျိုးနှင့် ပတ်သက်၍ မရေမတွက်နိုင်သောကွန်ဖရန့်များစွာရှိသည်။ အကယ်၍ သင်မည်သည့်နေရာတွင်ကြည့်ရမည်ကိုမသိလျှင်အလွန်လွှမ်းမိုးခြင်းနှင့်ခြိမ်းခြောက်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်အတွက်လုပ်ဆောင်ပေးသည် ကျွန်ုပ်တို့ကသင့်အားသူတို့၏တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မှုခေါင်းစဉ်များပေးထားပြီးထိုညီလာခံများသို့ရောက်ရန်မှာလွယ်ကူသည်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာလွယ်ကူပါတယ် သင်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲများကမ္ဘာတွင်တည်ရှိနေသောအကြောင်းအရာများ၊ အတွေ့အကြုံများနှင့်ကျော်လွှားခြင်းပုံပြင်များကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပါက၎င်းတို့အားလုံးမကြားလိုတော့ပါ။ တစ်ချိန်ချိန်တွင်၎င်းတို့ထဲမှတစ် ဦး ကိုသက်ဝင်ယုံကြည်ပါ။
အကယ်လို့မင်းက PowerPoint တင်ဆက်မှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်ပြီးပရိသတ်ကိုအိပ်ပျော်သွားစေဖို့ပျင်းစရာမလိုချင်ဘူးဆိုရင် ...
por ဟိုဆေးမှ Miguel လွန်ခဲ့တဲ့5အနှစ် .
သင့်ဘဝကိုပြောင်းလဲစေနိုင်သောလှုံ့ဆော်မှုသင်တန်း ၂၁ ခု
ဒီနေရာမှာစိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသောညီလာခံဗီဒီယို ၂၁ ခုပါ ၀ င်သည်။ ၎င်းတို့မည်သည့်နေရာကိုမဆိုတက်ရောက်ရန်ငွေများစွာကုန်ကျမည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်…
ကလေး ၄ ယောက်ရှိတဲ့သူကဖခင်တစ်ယောက်ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုဟာသတွေနဲ့ပြောပြတယ်
ဒီသင်ခန်းစာကို "စီမံခန့်ခွဲခြင်းဆိုင်ရာကလေးများ" ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ပါတဲ့ပို့ချချက်များမှာသင့်ကိုအကြံပေးလိုပါတယ်။ အကယ်စင်စစ်သင်ကပိုရလိမ့်မယ် ...
ခက်ခဲသောအချိန်များကိုကျော်လွှားနိုင်ရန်ကူညီရန် TED စကားပြောလေးခု
ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်ပျက်ကွက်ခြင်း၊ အထီးကျန်ခြင်း၊ စိတ်ပျက်ခြင်းစသည်တို့ကိုခံစားရမည်။ တခါတရံမှာငါတို့အာရုံစူးစိုက်မှုကင်းမဲ့၊
သူ၏အမည်မှာDamián Alcolea ဖြစ်သည်။ သူသည်စပိန်လူမျိုးသရုပ်ဆောင်တစ် ဦး ဖြစ်ပြီးစွဲမက်ဖွယ်မငြိမ်မသက်ဖြစ်နေသောရောဂါခံစားနေရသည်။ ဤစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါသည်အလွန်အမင်းမသန်စွမ်းသည်။ On …
ငါ၏အ chip ကိုပြောင်းလဲသွားတယ်သောညီလာခံ
ဒီနေ့ငါ့ရဲ့အမြင်ကတကယ့်ကိုလှုံ့ဆော်ပေးသူတစ်ယောက်နဲ့မင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးမယ်။ အမည်ဖော်ပြထားသည် ...
တစ်ရက်လျှင် ၁၀ မိနစ်သာလျှင်သင်ကျန်ရှိသောတစ်နေ့တာအတွက်ပျော်ရွှင်နိုင်ပါသည်
ဒီတိုတောင်းတဲ့ TED ညီလာခံကိုကြည့်ဖို့မင်းကိုငါဖိတ်ထားတယ်။ သူတို့ကငါတို့ကိုအကြောင်းပြချက်တစ်ခုပေးတယ်။
ဘာဝနာကျင့်စဉ်သည်သိပ္ပံဆိုင်ရာအထောက်အထားများစွာဖြင့်အကျိုးပြုသည်။ ၎င်းမှာသေချာသည်။ ဆောင်းပါး၏အဆုံးတွင်၊
လူတစ် ဦး ၏အာရုံကိုအာရုံပျံ့လွင့်စေသောအနုပညာ [ဟောပြောပွဲ]
Apollo Robbins သည်သရုပ်ဆောင်၊ စပီကာနှင့်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ဖြစ်သည်။ အဲဒါကိုဘာကြောင့်ထူးစေတာလဲ။ သင်၏စွမ်းရည် ...
သူသည်အသက် ၁၇ နှစ်သာရှိသေးပြီးပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်ရန်သူ၏လျှို့ဝှက်ချက်သုံးခုကိုဖော်ပြခဲ့သည်
ဒီစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ညီလာခံရဲ့ဇာတ်ကောင်တွေကို Sam Berns လို့ခေါ်တယ်။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်သူသေဆုံးပြီးဖြစ်သည် (ဤသို့ပြုလုပ်ပြီးသုံးလခန့်အကြာတွင် ...